ရင်နှင့် အမျှ အပိုင်း (၁) – တိမ်တိုက်ထွန်း ရေးတဲ့စာ
ရင်နှင့် အမျှ အပိုင်း (၁)
ကျွန်တော့်လို သာမန်သတင်းထောက်တစ်ယောက်အတွက်တော့ အစွမ်းကုန် ဖန် တီးပေးထားသော မင်္ဂလာပွဲဖြစ်သည်။ အသိ မိတ်ဆွေစာနယ််ဇင်းသမားတွေ၊ ဇနီးလောင််း မေမြသွယ်ရဲ့ လက်လှမ်းမီရာမိတ်ဆွေတွေနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ခင်ရာမင်ကြောင်း သတင်းရင်း မြစ်တွေ တော်တော်စုံလင်လှလေသည်။ ဖြူစင်သန့်ရှင်းမှုတွေ လွှမ်းခြုံစေချင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ် နဲ့ သတို့သား၊ သတို့သမီးဝတ်စုံကအစ စားပွဲစုံ၊ အလှဆင်ပန်း၊ ခန်းမအပြင်အဆင်တွေ အားလုံးအဖြူရောင်တွေချည်းရွေးချယ်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဖြူဖြူစင်စင်သန့်သန့် ရှင်းရှင််း မဖြစ်နို်င်ဘဲရှိလေသည်။ ဟုတ်တယ်။
ခမ်းနားထည်ဝါမှု၊ က္ကန္ဒြေကြီးမားမှု၊ မြန်မာ့ရိုးရာအဆင်တစ်မျိုးအဖြစ် အဖြူရောင် လွှမ်းခြုံသော အမရပူရချိတ်ကို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးဝတ်ဆင်ရုံတင်မကဘဲ သတို့ သမီး၏ဝတ်စုံပေါ် ပုလဲလုံးပေါင်းများစွာကို ဆင်မြန်းစေခဲ့သည်။ ပြီးတော့ ရူးမိုက်စွာပင် ပုလဲ လက်ထပ်လက်စွပ်ကိုလည်း ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့ ကြံရွယ်ခဲ့ပါသေးသည်။
”ပုလဲဆိုတာ မျက်ရည်စက်နဲ့တူလို့ ပုလဲလက်ထပ််လက်စွပ်၊ စေ့စပ်လက်စွပ်တွေဟာ ကံဆိုးစေတယ်တဲ့။ စိန်ပွင့်သေးသေးလေးနဲ့ လက်စွပ်ပဲရွေးကြတာပေါ့ သော်မင်းနောင်”
ဇနီးလောင်း၏ အကြံအစည်အတိုင်းလိုက်လျောခဲ့ရသည်။ တွေဝေမှုပေါင်း၊ စဉ်းစားမှု ပေါင်းများစွာဖြင့် ဒီမင်္ဂလာပွဲကို ဖန်တီးလာခဲ့ရပြီ။ အခုလည်း ကျရော…ကျွန်တော် ဒီနေရာ ကနေ ကွယ်ပျောက်သွားချင်လိုက်တာ။
မင်္ဂလာခန်းမထဲကို လျှောက်လမ်းအတိုင်း လက်ချင််းချိတ်လို့ မင်္ဂလာစင်မြင့်ပေါ်ကို သွားရတော့မည်။ ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ကျွန်တော်မချစ််မနှစ်သက်သောအမျိုးသမီးငယ််၊ ကျွန် တော်တို့နောက််မှာတော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေ အရှေ့ဖက်မှာ ပန်းကြဲ၊ လက်စွပ်ဗန်းကိုင််၊ ပန်းကုံးကိုင်၊ သတို့သားအရံ၊ သတို့သမီးအရံတွေ၊ ဘုရား…. ဘုရား။ ဒါ ကျွန်တော့် မင်္ဂလာ ဆောင်ပါလား။
”ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကုန်ကျစားရိတ်အများဆုံး မင်္ဂလာပွဲက ၁၉၈၁ ခုနှစ် မေလမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒူဘိုင်းစော်ဘွားမင်းသား ဆလမာရဲ့ မင်္ဂလာပွဲတဲ့၊ ဒေါ်လာ ၄၄ သန်း ကုန်တယ် ဆိုပဲ။ အခုက နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ လက်ရှိအဲဒီ အတိုင်းဆောင်ရင် ဒေါ်လာ ၄၄ သန်းမကတော့ဘူးပေါ့။ မြန်မာလို သေသေချာချာလေးဆောင်ရရင် ကျေနပ်တယ် မောင်၊ ကျွန်မပြောသလို ကုန်ကျစားရိတ်အများဆုံးတွေကိုလည်း မမက်မောပါဘူး။ မောင်နဲ့ အတူ နေရဖို့ပဲလိုချင််တာ”
သူမဆီက အီးမေးလ် တစ်စောင်ကို အမှတ်ရမိသည်။
ဟွာ (Hoa) ရေ။ ကျွန်တော့်နားထဲမှာ ”မောင်” လို့ မပီမသခေါ်တဲ့ ချစ််စဖွယ် အသံတွေ၊ ပုံရိပ်တွေ။
ဒီအချိန်မျာ ဒါတွေ တွေးသင့်ရဲ့လား။
လျှောက်လမ်းအတိုင်း ဖြေးညှင်းစွာလျှောက်လာရသည်။ ဖြူလွလွ စံပါယ်ပန်းတွေ ပေါ်ကို နင်းလျက်။
အခါတော်ပေး သီချင်းသံတွေ မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုလုံးကို စီးနင်းလျက်။ ခန်းမတစ််ခုလုံး အမှောင််ချထားပြီး လျှောက်လမ်း ကိုသာ ဆလိုက်မီးတွေ ထိုးပေးထားပါသည်။ ခန်းမထဲအ ဝင် စားပွဲသုံးလေးလုံးဖြတ်လျှောက်လာအပြီး တစ်စုံတစ်ခုက ကျွန်တော့်ကို ဆွဲငင်ညှို့ယူ နေသယောင် ခံစားလာရသည်။
ဘယ်သူကများ ကျွန်တော့်မင်္ဂလာဆောင်မှာလာငိုနေရတာပါလိမ့်။ ကျွန်တော့် ခြေလှမ်းတွေ တုန့်ခနဲရပ်သွားပြီ။ သေချာကြည့််လိုက်မိပါသည်။ ပခုံးကျော်ကျော်အထိဝဲကျ နေသော ဆံပင်အုံထူထူတွေကိုသာမြင်ရသည်။ မျက်နှာကိုတော့ ကွယ်ထားပြီထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ထိတ်ခနဲဖြစ်ကာ ကြက်သီးမွှေးညှင်းများပါထသွားရပြီ။
ဟုတ်တယ်။ ဒါ ဟွာ(Hoa) ပဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်တွယ်ပြီး သင် ပေးခဲ့ဖူးသော ဒီဆံပင််တွေကို မမှတ်မိစရာအကြောင်းမှမရှိတာ။ မင်္ဂလာဆောင်ကို ”Hoa” လိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့အသိက ကျွန်တော့်အပေါ်သွေးပျက််တုန်လှုပ်စေခဲ့ပြီ။ ဘုရား… ဘုရား။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။
စားပွဲဝိုင်းရှိရာကိုသွားဖို့ ခြေလှမ်းပြင်စဉ်မှာပဲ သတို့သမီးက လျှောက်လမ်းမှားတယ် အထင်နဲ့ ကျွန်တော့်ကို ထိန်းချုပ်ထားလေသည်။ လျှောက်လှမ်းနေသော ခြေလှမ်းတွေ မမှန်တော့ပြီ။
ဒီ မင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်ဖို့ အချိန်မီပါသေးရဲ့လား။ ဒါဘယ်သူ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းလဲ။ အတွေးပေါင်းများစွာ။
”သူဇာ.. သူရောက်နေတယ်။ ညာဖက်အနောက်စားပွဲအစွန်းမှာ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး သူ့ကို တားထားပေးပါဟာ။ သူမကြာခင် ဒီကထွက်သွားလိမ့်မယ်။ ငါသူ့ကို အရမ်းတွေ့ချင််နေ တယ်။ ခန်းမအပြင်ဖက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုင်ခိုင်းထားပေးပါ။ ငါအမြန်ဆုံးထွက်လာခဲ့မယ်”
ကျွန်တော်ဘာမှ မကြားချင်် စိတ်ထဲမှာတုန်ရီနေလျက်။ မျက်လုံးက အဲဒီစားပွဲဆီကို ပဲရောက်နေသည်။ သူဇာ… အဲဒီ စားပွဲကို ရောက်သွားတော့ စကားတွေပြောနေကြတာ ၀ိ်ုးတဝါးမြင်နေရသည်။ သော်မင်းနောင်ဟာ ဒီနေရာမှာ ရှိမနေသင့််ပါဘူး။ အရှည်ကြာဆုံး မိနစ်တွေကို ဖြတ်သန်းရင််း..။
မင်္ဂလာပန်းကုံးစွပ်တာ၊ မင်္ဂလာလက်စွပ်ဆင်မြန်းတာ၊ ကတိကဝတ်ပြုတာ၊ မုန့်ခွံ့ ကျွေးရတာ… ဒါတွေပြီးလို့ စင်အောက်ကိုဆင်းတော့မှာပဲ။
ကျွန်တော် ဟန်မဆောင်နိုင်တော့၊ လူကြီးစားပွဲနှစ််ဝိုင်းကို နှုတ်ဆက်ပြီး မေမြသွယ် ကို ထားခဲ့ကာ ခန်းမရဲ့ အပြင်ဖက်ဆီကို အပြေးတစ်ပိုင်းထွက်လာခဲ့သည်။ သူမ နောက်က လိုက်သွားပြီး စကားပြောပေးဖော်ရသော သူဇာကို သူမနဲ့ အတူထိုင်နေတာတွေ့ရသည်။
”သူ မြန်မာလိုနားမလည်ဘူး၊ နိုင်ငံခြားသူပါ”
Hoa အကြောင်းကိုတော့ မေမြသွယ်အနည်းနဲ့အများသိထားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်တွေဆီက တစ်ဆင့်။
အဲဒီတော့မှ မေမြသွယ်ဟာ Hoa ကို တစ်ချက််ပြုံးပြကာ မင်္ဂလာခန််းမထဲဝင်သွား လေသည်။ သူမနောက်က သူဇာပါ ပါသွားလေတော့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်သာ ကျန် ခဲ့လေသည်။
ရင်းနှီးချစ််ခင်ခဲ့သည့် သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး အခုလို မျိုးအေးစက်စက် ဆက်ဆံ ရေးမျိုးတော့ မရှိခဲ့။ စတွေ့တုန်းက ဘုနဲ့ဘောက်ဖြစ်တာက တစ်ပိုင်းပေ့ါ။ ဆောရီးဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ကျွန်တော်ပြောသင့်ပါရဲ့လား။ ဘဝတစ်သက်တာလုံး လက်တွဲဖို့ ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ပြီး… အစီအစဉ်တွေကို သေသေချာချာချထားခဲ့ပြီး ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မပေးဘဲ သစ္စာဖောက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ကို သူမက ဒီတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပါ့မလား။
ကျွန်တော့ ပါးစပ်က ထွက်လာတဲ့စကား။
Why? Why? ဆိုတဲ့အသံက တိမ်ဝင်သွားသည်။ ပြီးတော့ ဘာစကားမှ ထွက်မလာ ဘဲ ရှိုက်ငိုနေလေသည်။ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်အပြီးမှာတော့ စကားသံသဲ့သဲ့ထွက်လာ၏။
”ယူ့ကို သစ္စာဖောက်တယ်လို့မပြောချင််ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု တော့ကြားချင်တယ်။ ဟိုချီမင်းစီးတီး လူတစ်ယောက်နဲ့ ရန်ကုန်က လူတစ်ယောက်ဆုံ စည်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုက လွဲရင်ပေါ့လေ”
သူမအထွက် ကျွန်တော် လှမ်းတားလိုက်သည်။
”နိုး၊ အိုင်က ဒီနေရာကို မဖိတ်ဘဲနဲ့ ရောက်လာတာပါ။ ဘယ်သူမှ မသိအောင်ပြန်ခွင့် ရှိတယ်လေ”
ကျွန်တော့်လုပ်ရပ်ဟာ မြန်မာယောက်ျားထုတစ်ခုလုံးကို အထင်သေး၊ အမြင်သေး လောက်အောင်ဖြစ်စေခဲ့ပြီလား။
သူမကို ကျွန်တော် ဘာကြောင့် သစ္စာဖောက်ခဲ့သလဲဆိုတာ အမှန်အတိုင်းပြောပြ သင့်သလား။ ဟင့်အင်း။ ပြောပြလို့ မဖြစ်။ ဒါဆို…
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ခြင်းဖူးစာက ရှိတော့ရှိတယ် ဒါပေမဲ့ ရှားတယ်
သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်သည် ဘန်ကောက်မြို့၏ အရှေ့ဘက် ၂၅ ကီလိုမီတာအကွာ ခန့်တွင် တည်ရှိပါသည်။ လေဆိပ်ကြီးကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းက ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပြီး အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာ အထင်ကရတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥရောပနိုင်ငံ တွေ အပါအဝင် ပြည်တွင်းကနေ တိုက်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်းမရှိတဲ့ နေရာတွေဆီကိုသွားဖို့ အတွက် သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်ကနေ တစ်ဆင့်ခရီး (transit) ဖြင့်သွားရောက်ကြရ၏။
လေဆိပ်ရဲ့ တစ်နေရာမှာ ကျွန်တော်ရောက်နေပါသည်။ Nikon တံဆိတ်လက်ကိုင် ကင်မရာ ငယ်တစ်လုံးဖြင့် နေရာအနှံ့ဓာတ်ပုံရိုက်ယူနေသည်။ အဆောက်အအုံအတွင်း သေသပ်ကျနစွာ စိုက်ပျိုးထားသော သစ်ခွပန်းပင်အမျိုးမျိုးတွေ၊ လေယာဉ်အမျိုး အစားစုံစုံလင်လင် အ ရွယ်အစားစုံစုံလင်လင်တွေကို အတွင်းဘက်မှ လှမ်းမြင်ရပုံ၊ လေဆိပ်အတွင်းရောင်းချနေ သည့် အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို စိတ်ဝင်တစားလိမ်းခြယ်နေ၊ စမ်းသပ်သုံးစွဲနေသည့် မိန်းမပျိုလေးများ၊ လူကျိတ်ကျိတ်တိုးစည်ကားနေသည့် ထိုင်းရိုးရာ အစားအသောက်ဆိုင် စသည်ဖြင့် ရှုခင်းဓာတ်ပုံ ကောင်းကောင်းတွေ ကျွန်တော့်ကင်မရာ ထဲ ရောက်ရှိပြီးဖြစ် သည်။
ကြိုးမဲ့အင်တာနက်အခမဲ့ဇုန် (WiFi Free Zone) အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားသော နေရာတော်တော်များများကို တွေ့ရသည်။ ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ ခရီးဆက်သွားရ မည့်နေရာ (Terminal:3) မှာလည်း အများပြည်သူသုံးနိုင်ဖို့ ကွန်ပျုတာ (Touch Computer) ကြီးတစ်လုံး ထားထားပေးကာတွေ့ရသည်။ Terminal3ကနေ TG 315 လေယာဉ်လိုင်းဖြင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့ကို ထွက်ခွာကြရမည့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ကို တော့ ခြောက်ယောက်လုံး စုံစုံလင်လင်မတွေ့ရသေး။ စျေးသွားဝယ်သူ၊ ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက် သူ၊ မုန့်သွားစားသူတွေဖြင့် လေယာဉ်စီးရမည့်အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြခြင်းပင်။ ကျွန် တော်လည်း ….
ဓာတ်ပုံတွေလည်း တော်တော်စုံနေပြီ။ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ အင်တာနက်လေးသုံးဦးမှ လို့တွေးပြီး Touch Computer ကိုအသွား၊ Google စာမျက်နှာကိုဖွင့်ဖို့ ကြံရွယ်စဉ်မှာပဲ အဖြစ်အပျက်ကစတင်ခဲ့လေသည်။ ကျွန်တော့်လက်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်၏ တွန်းဖယ် တာခံလိုက်ရသည်။
ကျွန်တော်နေရာဝင်လုကာ အင်တာနက်သုံးဖို့ကြံရွယ်လိုက်တာ။ ကျွန်တော့်ကို လည်း တစ်ချက်မျှတောင်မကြည့်။ စိတ်တိုတိုနဲ့ သူမကို ကြည့်မိလိုက်တော့ သူမကလည်း မကျေနပ်တဲ့မျက်ဝန်းနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ကြည် ့သည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် လှမ်းမေးသည်။ အာရှသား၊ အာရှသူ ပုံစံပေမယ့် မြန်မာတော့ ဟုတ်ပုံမရပါ။
“မင်းဘာကြောင့် ငါသုံးခါနီး လုသုံးရတာလဲ”
“မင်းမှမသုံးသေးတာ၊ ငါသုံးခွင့်ရှိတာပဲ။ ဒါလေဆိပ်မှာထားတဲ့ ပစ္စည်းလေ၊ ယူ့ အပိုင်မှ မဟုတ်ပဲ”
တော်တော်စွာတဲ့ မိန်းကလေးပဲ။ ကျွန်တော်အလျှော့ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါသည်။
“အိုကေ၊ အိုကေ မိန်းကလေးမို့ မင်းကို အလျှော့ပေး လိုက်ပါ့မယ်။”
“Gender ခွဲပြီးပြောတာကို ကျွန်မအမုန်းဆုံးပဲ၊ မိန်းကလေးဖြစ်လို့ အလျှော့ပေးတာ ဆိုရင်တော့ ဆက်မသုံးတော့ဘူး”
တော်တော်အကြောတင်းပုံရတဲ့ အဲဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးကိုသာ စိုက်ကြည့်နေမိ သည်။ သူတို့ ဘာသာစကားနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး ပွစိပွစိရေရွတ်နေသည်။ နားမလည် အောင်ဆဲနေတာလားမသိ။ မျက်မှန်ထူထူ၊ ဆံပင်အုံထူထူပျော့ရှည်ရှည်လေးတွေနဲ့ ချစ်ဖို့ တော့ကောင်းပါသည်။ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ ကျွန်တော်နားမလည်သည့် ဘာသာစကားနဲ့ ရေ ရွတ်နေတာကိုတော့ ကျွန်တော်မကြိုက်လှပါ။ ဒီနေရာက ထွက်မသွားခင် တစ်ခုခုတော့ ပြောခဲ့ရလိမ့်မည်။
“ဟေ့ ငါ့ဘာသာငါ ဒီနေရာကို အရင်ဆုံးရောက်လာတယ်၊ အင်တာနက်သုံးဖို့ ကွန် ပျူတာကို ကိုင်တယ်။ မင်းကိုဘာမှ အနှောင့်အယှက်မပေးခဲ့ဘူးနော်၊ မင်းကသာလာပြီး စနှောင့်ယှက်တာ။ ရှေ့ မှာ ငါနားမလည်တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ပွစိပွစိ လုပ်နေစရာမလိုဘူး”
“ဒါ ကျွန်မ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပဲ၊ လုပ်ချင်သလိုလုပ်မယ်။ ရှင့်ကို စနှောက်ယှက် တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မက လျင်သူစားစတမ်းပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်တတ်လို့…”
ဆက်ပြောနေရင် ပြဿနာထပ်တက်တော့မှာမို့ ကျွန်တော်လှည့်ထွက်ဖို့ကြံလိုက်် သည်။ ဘယ်လို ကောင်မလေးပါလိမ့်။ လျင်သူစားစတမ်းပုံစံနဲ့ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုပဲ။ ကျွန်တော်တို့ တိုက်မှာသတင်းလိုက်ရင်တော့ သူများထက်ဦးအောင်၊ သူများထက်ထူး အောင်လိုက်ရသလို တိုက်ပိုင်သတင်းထောက် အချင်းချင်းလိုက်နေတဲ့ သတင်းတူရင် လည်း လျင်သူစားစတမ်းပြိုင် ဆိုင်ရတာကိုသတိရမိသည်။ ဒီအမျိုးသမီးငယ်ကို စာနယ်ဇင်း လောကထဲဝင်ခိုင်းရင်တော့ တော်တော်ခွင် (ဂွင်) ကျော်တဲ့ သတင်းထောက်ဖြစ်လာမှာပဲ။ သူမလောဘကြီးပုံနဲ့များ။
“မင်္ဂလာပါမဒမ်၊ မင်္ဂလာပါ ဆာ ပျော်ရွှင်သော ခရီးဖြစ်ပါစေ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလေဆိပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကို စစ်တမ်းကောက်ယူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဟောဒီဖောင်လေးတွေပေါ်မှာ မှတ်ချက်တွေ ပေးပေးပါလား ခင်ဗျာ”
နှစ်ယောက်စလုံး အဲဒီနေရာက ထွက်မသွားဖြစ်ဘဲ လူငယ်လေး၏ အပြောကို ခေါင်းညိတ်မိလိုက်ကြသည်။ သူဝဏ္ဏဘူမိ လေဆိပ်အတွင်း စကားသံတိုးတိုးလေးတွေပြော ပြီး လေဆိပ်စစ်တမ်းကောက်ယူနေသည့် လူငယ်လေးတွေတော်တော်များများတွေ့ရပါ သည်။ စိမ်းဝါရောင် ယူနီဖောင်းလေးတွေကိုယ်စီနှင့် ။
“နှစ်ယောက်တူတူ ခရီးထွက်လာတာဆိုရင် ဖောင်တစ်စောင်တည်းကို ဖြည့်လို့ အ ဆင်ပြေမလား”
ဖြေသံက တစ်ပြိုင်တည်းထွက်လာတာကြောင့် လူငယ်လေးကြောင်ကြည့်နေ၏။
သူမငြင်းသည်။ ကျွန်တော်နဲ့ ဖောင်တစ်စောင်ကို တူတူဖြည့်လိုက်တော့ ဘာဖြစ် သွားမှာမို့လို့လဲ။ တကယ်ကြီးကျယ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးပါလား။
စစ်တမ်းကောက်သည့် လူငယ်လေးက အားနာသွားဟန်ဖြင့် တောင်းပန်သည်။ ပါလာသည့် ကျောပိုးအိတ်လေးထဲမှ စစ်တမ်းဖောင်တွေကို ထုတ်ယူနေ၏။
“ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်က ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဆိုပေမယ့် ဖောင်တစ်စောင် တည်းကို နှစ်ယောက်အတူတူဖြည့်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်”
“ကျွန်မ အဆင်မပြေဘူး တစ်စောင်စီပဲပေးပါ”
“ကျွန်တော်က တစ်စောင်တည်းမှာပဲ တူတူဖြည့်ချင်တာ၊ စာရွက်တစ်ရွက်သက်သာ ရင်လည်း အမှိုက်သက်သာရာ မရောက်ဘူးလား”
နောက်ဆုံးတော့ ဖောင်တစ်စောင်စီမှာပဲ ဖြည့်ပေးလိုက်ကြပါသည်။ လူငယ်လေးက ကျွန်တော် တို့နှစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီး လက်ဆောင်မှတ်စုစာအုပ်တစ် အုပ်စီပေးသည်။
ကိုယ်နဲ့ဘာသာစကားမတူ၊ နိုင်ငံမတူတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ကိုယ့်ဖက်က အဆင်ပြေပြေဆက်ဆံခဲ့တာချည်းပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအမျိုးသမီးလေးနဲ့ကျမှ ဘုနဲ့ ဘောက်ဖြစ်ရသည်။ ဒါဟာ အမှတ်တမဲ့ပဲပျောက် ကွယ်လောက်မှာပါလို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒီလောက်နဲ့မပြီးခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရေစက်က ဆန်းကြယ်လှပေ သည်။
Previous PostPrevious ပိုက်ဆံတစ်သိန်းနဲ့ ငပလီ သွားမယ်
Next PostNext ရင်နှင့် အမျှ အပိုင်း (၂)